မြန်မာဘာသာနဲ့ V-ROOT ဆော့ဝဲ ~ ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး)
ဗိုလ်လှိုင်း ဘလော့အိမ်လေးမှ တင်ထားသမျှ ကြည့်ရန်
Home » Android Software » မြန်မာဘာသာနဲ့ V-ROOT ဆော့ဝဲ
မြန်မာဘာသာနဲ့ V-ROOT ဆော့ဝဲ
Saturday, September 21, 2013 Android Software
Vroot (မြန်မာလို ဆော့ဝဲ)
Andriod ဖုန်း တွေနဲ့ Tablet အမျိုးစား အားလုံးနီးပါး ကို VRoot က Root ပေးနိုင်ပါတယ်။ Andriod ဖုန်းတော်တော်များများကို Root ပေးနိုင်တဲ့ ဆောဝဲကောင်းလေးပါ။ အရမ်းလည်းအသုံးဝင်ပါ တယ်။ ဒီ ဆောဝဲလေးက မြန်မာလိုမျိုး ဆိုတော့ Root ရတာပိုလွယ်ပါတယ်။ ဒီနေ့ပဲ ဖုန်း၂ လုံး ကျနော့်ဆီ လာပြီး မြန်မာဖောင့်လာထည့်ပါတယ်။ ကျနော် Unlock Root Pro နဲ့ Root တာ တလုံးကအဆင်ပြေပြီး ကျန်ဖုန်းတလုံးကမရဖြစ်နေတာ။
အဲတာနဲ့ VRoot လေးကို ဆိုဒ်တဆိုက်ကနေ တွေ့ထားလို့ မြန်မာလို ပြောင်းနည်းပါတခါတည်း ရေးထား လို့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် စမ်းသပ်ပြီး Root စမ်းကြည့်တာ အရမ်းကိုလွယ်ပြီး မြန်လည်းမြန်ပါတယ်။ ဆောဝဲ က မြန်မာversion ဆိုတော့ အတော်လေးအဆင်ပြေပါတယ်။ Andriod Version 1.2 ကနေ 4.2.2 ထိအဆင်ပြေပါတယ်။ ဖုန်း Driver သာ ပြည့်စုံနေပါစေ Root သာက အရမ်းကိုလွယ်ပါတယ်။ အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ ဆောဝဲ install နည်းပါ တခါတည်းရေးပြထားပါတယ်။
အရင်ဆုံး VRoot Font ကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းပြီး ကွန်ပြူတာမှာ install ပါ။ ပြီးရင် ပြီးရင် VRoot ဆောဝဲကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းပါ။ ဒေါင်းပြီးရင် VRoot ကိုကွန်ပြူတာမှာ install လုပ်ပါ။ ပြီးရင် နောက်တခု က Rootres.zip ကို ဒီလင့်မှာ ဒေါင်းထားလိုက်ပါ။ ပြီးရင် Dasktop က VRoot Icon ညာကလစ်ထောက် လိုက်ပြီးရင် အောက်ကပုံအတိုင်းဆက်ကြည့်လိုက်ပါ။
ပုံမှာပြထားတဲ့အတိုင်း Open File Location ကိုဝင်ပြီး အထဲမှာရှိတဲ့ Rootres.zip ကို ပြစ်ထုတ်လိုက်ပြီး ခုနက ဒေါင်းထားတဲ့ Rootres.zip ကို အဲနေရာမှာ ထည့်လိုက်ပါ။
ဒီအဆင့်ပြီးရင်တော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါပြီ။ VRoot ဆောဝဲလေးက မြန်မာ version နဲ့ အဆင်ပြေပြေ အသုံးပြုလို့ရပါပြီ။ ဆိုက်တဆိုက်ကနေ တွေ့လို့ ကျနော်ကိုယ်တိုင် နည်းလေးကိုပြန်ရေးထားတာပါ။ အဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်။ ကျနော် ဖုန်းတွေကို Root နေစဉ် ရိုက်ထားတဲ့ Screenshots လေးပါ အောက်မှာ ပြထားပေးပါတယ်ဗျာ။ ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါ အရမ်းလန်းပါတယ်။
ဖုန်းတွေကို Root နေစဉ် ရိုက်ထားတာလေးတွေပါ။ မြန်မာစာနဲ့ဆိုတော့ အရမ်းကိုအဆင်ပြေပါတယ်။ Root တာလည်းအရမ်းကို အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖုန်းတွေ မြန်မာဖောင့်ထည့်ဖို့ Root မယ်ဆိုရင် ဒါလေးက တကယ်ကို ကောင်းပါတယ်ဗျာ။
အားပေးဝင်ရောက်ကြည့်ကြသော သူငယ်ချင်းများအားလုံးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ ဗိုလ်လှိုင်း(ဆိပ်ဖြူသားလေး)
ဘလော့မှာ တင်သမျှ ဖုန်းတွင်ဖတ်နိုင်ရန်
~~Yangon Bus Report.apk~~
Myanmar Application Centreမှ ကြိုဆိုပါတယ် အခုတင်ပေးထားတဲ့applicationလေးကတော့ Yangon မြို့ အတွင်း ရှိ Bus Carလိုင်းများနျှင့်ပက်သက်ြ...
~~ယဉ်မောင်းသူတိုင်းဆောင်ထားသင့်တဲ့ Active Wheel.apk~~
Myanmar Application Centreမှကြိုဆိုပါတယ် အခုတင်ပေးထားတဲ့ Applicationလေးက ယဉ်မောင်းသူတွေ ဆောင်ထားသင့်တဲ့ Applicationလေးပါ ယခုApplic...
Myanmar Application Centre.apk Version ထွက်ပြီ
အင်တာနက်လေး ၅ မိနစ်ဖွင့်ရုံနဲ့ Myanmar Developerတွေရေးသားထားတဲ့Applicationများ၊ နည်းပညာသတင်းများကို အချိန်နှင့်တပြေးညီ ဖတ်ရှုသိရှိ...
Myanmar Application Centreမှ ကြိုဆိုပါတယ် အခုတင်ပေးထားတဲ့ Applicationလေးကတော့ အခြားသူတွေ မသိအောင် နာမည်ဝှက်နဲ့ ကိုယ်ဖြစ်ချင်တဲ့ဟာလေးေ...
~~ဖုန်းကို Spyလုပ်နိုင်မည့် Spy.apk~~
Myanmar Application Centreမှကြိုဆိုပါတယ် SpyAppကို installလုပ်ထားသောဖုန်းများအား အခြားမည်သည့်ဖုန်းမှမဆို မက်ဆေ့(sms)ပို့၍ Tracking ...
Myanmar Application Centre မှ ကြိုဆိုပါတယ် အခုတင်ပေးမယ့် ဆော့ဝဲလေးက တရားခွေ တွေ နားချင်တဲ့သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေပါတယ် Online လေး ရှိယုံ...
Shwebook PDF Reader.apk
Myanmar Application Centreမှ ကြိုဆိုပါတယ် အခုတင်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲလေးက အင်္ဂလိပ်စာတွေ ဖတ်သူတွေ အတွက် အဆင်ပြေပြေဖတ်နိုင်မယ့်ဆော့ဝဲလေးပါ က...
Corel VideoStudio Ultimate X10 + Crack Full Version
Corel VideoStudio Ultimate X10 Latest Version isavideo editing software that supports 360-degree VR footage. Now the user can eas...
Adobe After Effects 64-bit
Version: CC 2017 14.0.1 Size: 1.8 GB Release Date: 17/Dec/2016 Program for animation, images and texts and make them as video. ...
~~Zaw Vs Uni_1.5.apk
Myanmar Application Centreမှ ကြိုဆိုပါတယ် အခုတင်ပေးမယ့်ဆော့ဝဲလေးက Zawgyi နဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကို Unicode ချိန်းပေးလို့ရသလို
android Wallpaper များ
Android Root Too များ
Android Root Tool များ
Android Root Tools များ
Android Wlallpaper များ
Coolpad firmware များ
့HUAWEI ( C ) အသုံးပြုသူများ
့HUAWEI ( G ) အသုံးပြုသူများ
့HUAWEI ( P ) အသုံးပြုသူများ
့HUAWEI ( Y ) အသုံးပြုသူများ
့HUAWEI U အသုံးပြုသူများ
Huawei ဖုန်းတွေအတွက်Secret Codeများ
PC Wallpaper များ
Samsung official Firmwares
Setp2Fail Error
wifi hack နည်း
Windows password ဆိုင်ရာ
ဖုန်း Hardware ဆိုင်ရာများ
ဖုန်းတွင် Google app များထည့်နည်း
လေ့လာရန်ဆိုဒ်များ<!- change the links with your own -> ကိုကြီးဘလော့ခရီးသည် အကြင်နာနန်းတော် မောင်(စွယ်စုံကျမ်း) လယ်တီမြေသား လွင်ဦးမောင်(မြောင်းမြသားလေး) ဝင်းကမ္ဘာကျော် ကိုလတ်(ကျွဲဆင်) ကိုမောင်ပေါက် အမျိုးကောင်းသား ကိုခိုင်ထူး MP Firmware ဒေါင်းရန် ROM များဒေါင်းရန် ညီလေး (ဘီလူးကျွန်းသားဆိုဒ်သို့) သိန်းစိုးဝင်း(နည်းပညာ) လွင်မင်းဗိုလ်(နည်းပညာ) သီချင်းများ စွာနားဆင်ရန်(အောင်လေး(နည်းပညာ) ညီနေမင်း(နည်းပညာ)
်flashsoung သီချင်းတစ်ပုဒ် သေချာပေါက် လုပ်တတ်ချင်သ...
Huawei U8950 N Root ဖောက်ကလိချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ...
Laptop ရဲ့ Speaker အသံပိုကျယ်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ...
Unlock Code တောင်းစရာမလိုတော့တဲ့ ERoot
Windows7အတွက် Windows 8 Theme အလန်းစား။
Computer Partition ကိုခွဲနည်းလေပါ။
သင့်ကွန်ပြူတာလေးနေရင် Wise Disk Cleaner
SPB Shell 3D APK v1.6.4
Huawei Honor2/Ascend G615(U9508) ဖုန်းတွေကိုအလန်းဆ...
Service သမားများအတွက် Firmwares များ ပို့ပေးမည်.. ...
Y210T Root & Wifi Error ရှင်းနည်း (၂)
U8825D,C8825D,U8950D,C8950D Root Tool Kit
ODIN Multi Downloader For All Samsung Galaxy Type
Samsung ဖုန်းများအတွက် Kies PC Suite Latest Versio...
Huawei ဖုန်း Step2error ကို ဘယ်လိုရှင်းမလဲ ?
Samsung GalaxyFirmwares များ
Galaxy Gio GT S5660 အား official 2.3.6 တင်ခြင်း
The Dark Eye Chains of Satinav
Huawei Sonic U8861 Firmware
HUAWEI U8813D IMEI NULL ဖြေရှင်းနည်းလေးပါ
Gravity Screen Off Prov 1.41 Apk (219.22 KB)
Fake Call & SMS Pro v1.8 Features :
Screen Off and Lock Donate APK 1.17.2 Android
Fake Call - Sms - Call Logs Pro V3.9 Android Apk
အရန်းလန်းတဲ့ Real Fake Call ဆော့ဝဲလေးပါ
C8825D အတွက် CDMA 800 Mhz Internet Setting ရပါပြီ။...
huawei c8825 internet setting မရတဲ.သူတွေအတွက်ပါ
PDA.Net (Version 2.1 တွေကို Computer နဲ့ချိတ်ဆက်အသ...
Apk Shell Ext (Apk Icon တွေကို ကွန်ပြူတာမှာပေါ်အောင...
C8813,CDMA ကို GSM 3G သုံးကြမယ်
C8813,C8813D,Y300C တို့ Network Lock,Bootloader Lo...
ဒီပလိုပါ ဦးဖြိုးချမ်ရေးတဲ့ Myandroid v1.4
magic setup တဲ့ဗျာ ကွန်ပျူတာ Backround အလန်းစားလေး...
PC ကနေ အလွယ်ကူဆုံး WiFi ပြန်လွှင့်မယ်
Huawei နဲ့ Sony ဖုန်းများရဲ့ Official Firmware ကို...
Battery အားပြည့်ရင် အချက်ပြပေးမဲ့ Battery Full & U...
ဖုန်းခေါ်တာလန်းချင်ကြတဲ့သူငယ်ချင်းများ Call.apk ( သ...
မိမိတို့ android ဖုန်းပေါ်ကနေ PDF file တွေကို အဆင်...
G610S အထွက် (လုံးဝ)မှန်မည့် မြန်မာဖောင့်
Huawei U8815(G300) root လုပ်နည်း'
ဓာတ်ပုံတွေကို ဘောင်လှလှ ဒီဇိုင်းလှလှ အလွယ်ပြုလုပ်ေ...
Window7ရဲ့ Starting Windows ကို မိမိနံမည်ပြောင်း...
ကွန်ပျူတာလေးနေသူများအတွက် WinASO v4.8.2 full
ကွန်ပျုတာထဲ Virus ၀င်တာတွေ အပြည့်အ၀ ကာကွယ်ဖို့ နည်...
ဘာသာမျိုးစုံ စကားပြောနည်း၊ရေးနည်းစာအုပ်စုံ စုစည်းမ...
Computer Problems များ ဖြေရှင်းနည်းများ (မြန်မာလို...
ကွန်ပျူတာတစ်ခုလုံးကို Mouse မသုံးဘဲ မျက်လုံး / ခေါ...
Android ဖုန်းကနေ Facebook Account အကောင့်လုပ်မယ် (...
windows registry အကြောင်းကိုလေ့ လာချင်တဲ့ သူငယ်ချင...
(လုံးဝအလန်းလေးနော်) Right Click Menu ထဲမှာ မိမိထည်...
ကွန်ပျူတာကို ကိုယ့်မျက်နှာလေးနဲ့ password ပေးမယ်
Viber Code မရလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက် Code စောင့်...
သင့်ကွန်ပြူတာကို smart phone တွေမှာလို pattern loc...
JAPAN 3D PUSSY GAME ( ၁၈ နှစ်အထက်များသာ ကစားရန်)
10000/-K ငွေဖြည့်ပီသား ငွေဖြည့်ကဒ်(3)ကဒ်ရှိရုံနဲ့ ...
ဓာတ်ပုံလေးတွေနဲ့ Video Slide Show လေးတွေဖန်တီးနိုင...
Shake လိုက်ရုံနဲ့ဖြစ်ဖြစ် Lock Screen ကိုဖွင့်လို့...
Screen Lock ကို အသံနဲ့ အမိန့်ပေးပြီးဖွင့်လို့ရအောင...
Windows Explorer has Stop Working ကိုသုံးနည်းနဲ့ြေ...
Sim Card lock ကျသွားတဲ့အခါ...
ကွန်ပျူတာ အမေး၊ အဖြေ စာအုပ် ( မြန်မာလို )
facebook လေးကို Android application လေးဖန်းတီးနည်း...
Skype အသုံးပြုနည်း စာအုပ် ( မြန်မာလို )
Y300 (T8833) Firmware လေးပါ (337.83Mb)
Facebook ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ စာအုပ် ( မြန်မာလို
Twitter အသုံးပြုနည်း စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်
လူသုံးများတာတော့ ကြာလှပါပြီ ဒါပေမယ့် တောင်းဆိုထား...
မြန်မာလူမျိုးတိုင်း သိထားသင့်တဲ့ မြန်မာစကားပုံများ...
မိမိလက်မခံချင်တဲ့ ဖုန်းတွေကို တားဆီးပေးမယ့် ဖုန်းမ...
Youtube မှ ဗွီဒီယိုများကို ဆော့ဝဲလ်မသုံးပဲ အလွယ်ကူ...
Android Software (212)
android Wallpaper များ (10)
Android App (611)
Android Broswer (1)
Android Camera (3)
Android Fonts (14)
Android Games (47)
Android Launcher (6)
Android Root Too များ (5)
Android Root Tool များ (2)
Android Root Tools များ (2)
Android Wlallpaper များ (5)
Android နည်းပညာများ (50)
computer software (11)
Coolpad firmware များ (8)
Ebook များ (5)
Facebook ဆိုင်ရာ (63)
Firmware တင်နည်းများ (2)
HTC Firmware (1)
့HUAWEI ( C ) အသုံးပြုသူများ (6)
့HUAWEI ( G ) အသုံးပြုသူများ (13)
့HUAWEI ( P ) အသုံးပြုသူများ (1)
့HUAWEI ( Y ) အသုံးပြုသူများ (3)
့HUAWEI U အသုံးပြုသူများ (8)
Huawei ဖုန်းတွေအတွက်Secret Codeများ (1)
Mobile Tutorial (1)
Networking Tools (3)
Nokia ဆိုင်ရာ (1)
Online နည်းပညာများ (5)
Password ဆိုင်ရာ (1)
Pattern Lock (7)
Pc Game (199)
pc software (23)
PC Wallpaper များ (1)
photoshop သင်ခန်းစာများ (8)
ROM များ (9)
ROOT ပြုလုပ်နည်းများ (6)
Samsung official Firmwares (3)
Setp2Fail Error (9)
Video Edit (22)
wifi hack နည်း (1)
Windows password ဆိုင်ရာ (2)
Xperia Firmware (1)
ဖုန်း Hardware ဆိုင်ရာများ (13)
ဖုန်းတွင် Google app များထည့်နည်း (1)
ဖုန်းနည်းပညာ စာအုပ်များ (4)
မြန်မာစာမှန်စေတဲ့ Software (3)
Copyright © ဗိုလ်လှိုင်း (ဆိပ်ဖြူသားလေး) | Powered by Blogger